iiprojekthi Ze-Diy | Eyekhala 2022
Isanti yeVs engaxutywanga (Isikhokelo soYilo)
Isanti kunye ne-grout engafakwanga. Fumana ulwahlulo phakathi kweentlobo ze-grout kunye nendlela yokukhetha i-grout efanelekileyo kwiprojekthi yakho yeetile kunye nale khokelo yoyilo.
Ezona ndlela ziGqibeleleyo zokongeza ixabiso kwiKhaya lakho
Ezona ndlela zintle zokongeza ixabiso ekhayeni lakho kubandakanya neentlobo ezithandwayo zokulungiswa kweeprojekthi. Yongeza ixabiso lendlu yakho ngokubuyisela ezi zimvo zoyilo.
Umgangatho wekhonkrithi ugqiba isikhokelo sokuyila. Jonga imifanekiso yeentlobo ezithandwa kakhulu kumgangatho wekhonkrithi ogqityiweyo ekhayeni lakho.
Ubungakanani be fan yobushushu (Isikhokelo soYilo)
Isikhokelo soYilo lobungakanani be fan, kubandakanya ubungakanani obugcweleyo kwigumbi lokuhlala kunye nakwindawo zokulala. Fumana ifeni efanelekileyo yegumbi lakho ngokuxhomekeke kubukhulu bayo.
Ungawulungisa njani uMgangatho woMthi owonakeleyo
Ungawulungisa njani umgangatho wamanzi owonakeleyo ngumbuzo oqhelekileyo kuye nabani na onemigangatho eqinileyo yomthi. Nazi iingcebiso eziluncedo zokulungisa amanzi emigangatho yomthi eyonakalisiweyo.
Ukupeyinta njani iikhabhathi zasekhitshini ukujonga iAntique
Fumana indlela yokupeyinta iikhabhathi zasekhitshini ukuze ujonge izinto zakudala. Iikhabhathi zasekhitshini ezindala zinokongeza umtsalane kwiikhabhathi eziphelelwe lixesha kwaye zinike inkangeleko oza kuyithanda.
Ngaba ungawutshintsha umbala weTayile ngaphandle kokuYitshintsha?
Ngaba ungawutshintsha umbala weetayile ngaphandle kokufaka endaweni yawo? Fumana imibono yoyilo lweethayile ye-DIY yokutshintsha inkangeleko yoyilo lwakho lwangaphakathi.
Uyicoca njani imiphezulu yeetafile zeGranite
Fumana iindlela ezilungileyo zokucoca imiphezulu yeetafile yegranite ukuze ziqhubeke zikhangeleka zintle. Fumana iingcebiso eziphezulu zokugcina ikhawuntara yegranite kunye nezinto ezifanelekileyo oza kuzisebenzisa ukukhusela
Isikhokelo kwiitafile zekhitshi zekhonkrithi kubandakanya ukugqitywa okuthandwayo, indleko, iingcebiso ze-DIY kunye nezinto eziluncedo kunye nezibi Jonga imifanekiso yoyilo lwekhonkrithi yokuyila imiphezulu yeetafile.
Ucoceka njani kumgangatho weLinoleum
Fumana iingcebiso malunga nokucoca i-linoleum phantsi. Ngokulondolozwa okufanelekileyo nokuba i-linoleum endala yokugcoba ingaphinda ibuye ibonakale. Jonga amanyathelo kunye nezixhobo ezifunekayo
Iingcinga zeKhitshi elincinci le-DIY (UkuGcina kunye neeNgcebiso ngokuGcina indawo)
Apha sijonga ezona mbono zintle zekhitshi ze-DIY zokufumana okuninzi kwindawo encinci. Jonga izimvo zomququzeleli wokugcina kunye neengcebiso zokonga indawo
Ungalufumana njani ibala leWayini ngaphandle kweKaphethi
Ungalufumana njani ibala lewayini ekhaphethini ngokusebenzisa izinto eziqhelekileyo ezisendlwini kunye nendlela eyiyo yokususa amabala asetilini nakwitafile.
Indlela yokuxhoma izibane zomtya
Jonga indlela yokuxhoma izibane zomtya kwiindawo ezahlukeneyo kubandakanya amagumbi okulala, iindonga, iipatio, iidesika kunye nepargolas. Imifanekiso yoyilo lokukhanya lwangaphakathi nangaphandle.
Iingcamango zeGumbi lobuGcisa (ukuGcina, ukuCoca kunye noYilo)
Igalari yemibono yegumbi lobugcisa elimangalisayo ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo lokuzonwabisa, umdla kunye nohlahlo-lwabiwo mali. Jonga uyilo oludumileyo lwegumbi lobugcisa.
Uyilo lweDumbwaiter (Isikhokelo, DIY & Isikhokelo seelevator)
Apha sabelana ngesikhokelo sokuyilwa kwedumbwaiter kubandakanya iinkcukacha malunga nemanyuwali, ilifti kunye neemodeli ze-DIY. I-Dumbwaiters yayisetyenziswa ekuqaleni kwenkulungwane ye-19 kodwa eyokuqala irekhodwayo yayisetyenziswa malunga ne-200BC xa amaRoma ayisebenzisa ukuvumela ukuhanjiswa kwempahla. Yintoni i-dumbwaiter? A ...
Indlela yokuCoca iMarble Countertops
Fumana indlela yokucoceka imiphezulu yeetafile zemabhile ukuze zigcine ubuhle bazo kwiminyaka ezayo kwaye ufumane iingcebiso ezilungileyo zokugcina izibalo zemarble kunye nento oyisebenzisayo
Iimpawu zeFaux zeWood ezimangalisayo (Iingcamango zoyilo)
Igalari yemiqadi yeenkuni zokufakela iikhikhini, amagumbi okuhlala, amagumbi okutyela kunye noyilo lokulala. Fumana iingcamango ze-faux zeprojekthi yakho yoyilo lwangaphakathi.
Iingcamango ezingama-59 ze-Creative Wood Pallet (Imifanekiso ye-DIY)
Igalari yemibono yeplanga yokudala. Jonga ifanitshala yeplanga yeplanga kunye noyilo loyilo kubandakanya ishelfu, iitafile, iibhedi, iibhodi zentloko, izitulo, ujingi, imiqondiso kunye nokunye
Ukunxiba iimpahla ezimnyama zabafazi
izipho zomtshato kwizibini ezitshatileyo
Ubungakanani bemilinganiselo yekhethini yokuhlamba
I-melanie fiona kunye nejered cotter
ibhentshi elincinci leshawa
ubukhulu beendawo zegesi